अशोकको घर निर्माण कार्य २ प्रतिशत मात्र बाँकी, घर भित्र यस्तो देखियो (भिडियो सहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अशोकको घर निर्माण कार्य २ प्रतिशत मात्र बाँकी, घर भित्र यस्तो देखियो (भिडियो सहित)
सामाजिक संजालमा करिब ४ ५ महिना देखि एक छत्र राज गर्न सफल छन् बाल गायक अशोक दर्जी । उनको पहिलो युट्युब भिडियो ३ महिना आगाडी भाइरल भए सँगै आहिले उनको नाम राखेर सार्बजनिक गरिएका हरेक भिडियो धेरै भन्दा धेरै हेरिन्छ ।
धेरै राम्रा कुरा र थोरै नराम्रा कुरा पनि आउने गरेका छन् अशोक दर्जीका । अशोक दर्जीको भन्दा पनि अशोक दर्जीका अहिलेका अविभावक टंक बुढाथोकी अशोक दर्जीका प्रधानाध्यापक दिपक न्यौपानेको बारेमा विभिन्न नकारात्मक समाचारहरु पनि आएका थिए ।
अशोक दर्जी अहिले आफ्नो संगीतलाइ तथा पढाईलाइ निरन्तरता दिन काठमाडौँमा छन् । उनि अहिले काठमाडौँमा टंक बुढाथोकी सँग नै बसेर पटिरहेका छन् । अशोक दर्जीको घर निर्माणको क्रम जारी छ तर। निर्माणको काम भने अहिले अन्तिम चरणमा छ ।
लग भग घर निर्माणको काम अब २ प्रतिसत मात्र बाँकि रहेको जानकारी पनि आएको छ । अन्त्यमा कस्तो देखियो त अशोक दर्जीको नँया घरर घर भित्र कस्तो भ भन्ने कुरा आज यस भिडियोमा हेर्नुहोस् ।
तल भिडियो लिंकमा अशोक दर्जीको नँया घर हेर्नुहोला ।